» लकडाउनमा आजबाट के के खुल्छन् ?
लकडाउनमा आजबाट के के खुल्छन् ?
२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:१०
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनलाई केहि खुकुलो बनाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लकडाउनलाई केहि खुकुलो बनाएको हो ।
सरकारले ८० दिन लामो लकडाउनपछि लकडाउन खुकुलो पार्ने योजना ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने २१ दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यसअनुसार शुक्रबारदेखि उपत्यकाभित्र र अन्यत्र जिल्लाभित्र निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीअनुसार चलाउन पाइने भएको छ । तर सार्वजनिक यातायातका साधन, अन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवा अहिले पनि बन्द नै रहनेछ ।
यस्तै, पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खोल्न पाइनेछ । तर सपिङ मलहरू खुला हुने छैनन् । रेस्टुरेन्टहरू प्याकिङ र टेक अवे सेवा दिने गरी खुला गर्न सकिने छ भने क्वारेन्टिन बनाइएका बाहेकका होटलहरू बन्द नै रहनेछन् ।
सबै सरकारी, निजी र वित्तीय संस्थाका कार्यालय खुल्नेछन् । तर बिहान ८ देखि दिउँसो १ र दिउँसो १ देखि साँझ ६ बजेसम्म दुई सिफ्टमा चलाउनुपर्नेछ ।
विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू भने बन्द रहनेछन् । सभा समारोह, प्रदर्शन गर्न पाइने छैन भने सिनेमा हल, डान्सबार, पुस्तकालय, संग्रहालय, समूहमा खेलिने खेल, स्वीमिङ पुलहरू पनि खुला हुने छैनन् । सरकारले तोकेका २० बाहेक अरू अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका पनि बन्द नै रहनेछ ।
सरकारका अनुसार सञ्चालन गर्न नपाइने क्रियाकलापहरू यस्ता छन्ः
१. शैक्षिक संस्थाहरु ९यसभित्र विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर र तालिम केन्द्रहरू
२. अनुमतिप्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू ।
३. तोकिएको बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत(जावत
४. सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम र सेमिनार ।
५. सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलन ।
६. सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबारलगायतका मनोरञ्जनस्थल
७. सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना ।
८. स्पा, सैलुन र ब्युटीपार्लर
१०. स्विमिङ पुल, जिमखानालगायतका हेल्थ क्लबहरू
११. सपिङ मलहरू
१२. समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुतिहरू
१३. सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू
१४. यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन । पर्यटक सवारी साधनसमेत ।
१५. काठमाडौं उपत्यकाको हकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोहीसँग सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने निजी सवारी साधनबाहेकका अन्य निजी सवारी साधन।
किट सकिएर टेकु अस्पतालमा कोरोना परीक्षण रोकियो
मकवानपुरमा थप १ सय ११ जनामा कोरोना
थाहा नगरपालिकामा एम्बुलेन्सको विकल्प अटो (निर्णयसहित)